भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हातले पन्छाएर उद्धार ! « प्रशासन
भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हातले पन्छाएर उद्धार !
गायन । दशकौँको आन्तरिक युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तान प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको छ । बुधबारको भूकम्पले देशका धेरै भूभाग क्षतविक्षत भएका छन् ।
भूकम्पमा परी एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र एक हजार पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइते तथा मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । पक्तिका प्रान्तको गायन जिल्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ ।
भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेषमा मानिसहरूको खोजी भइरहेको छ । बाँचेकाहरू घरायसी उपकरण लिएर खोजी तथा उद्धारमा जुटेका छन् । उनीहरू हातले भग्नावशेष हटाइरहेका छन् । तालिबान र उनीहरूको नियन्त्रणबाट भागेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भूकम्प पीडितहरूलाई सघाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
दश महिनाअघि उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन ९नाटो० र अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै देशको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको छ । तालिबान शासन सुरु भएयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पनि लगभग रोकिएको छ । भूकम्प पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताका निम्ति आह्वान गरेका छन् ।
उनीहरूले भग्नावशेष हातले पन्छाएर पुरिएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न कठिन हुने पीडादायी परिस्थितिबारे जानकारी पनि गराएका छन् ।
Tags : भग्नावशेष भूकम्प